Fuulota guutuuf Mangoo irratti Akkaataa fuula garagaltuu - LibreOffice Help
Fuulota guutuuf Mangoo irratti Akkaataa fuula garagaltuu
Galmee irratti fuulota mangoof (Mirgaa) guutuu (Bitaa) Akkaataa fuula garagaltuu LibreOffice ofumaan fayyadamu nidandessa. Fakkeenyaaf, fuulota guutuuf mangoo irratti irraantoof jalaantoo garagara agarsiisuf Akkaataa fuula fayyadamu nidandessa. Akkaataa fuula ammee Kabala Haalojii irratti iddoohojii gara jalaatti agarsiisama.
Akkaataawwan Fuula Filmaataa Haaromsuuf
Dhangii - Akkatee fi Dhanga'uu, fi itti aansuun sajooAkkatee Fuulaa fili.
Tarree Akkaataa fuula keessatti, "Fuula Bitaa" mirga cuqaasi booda Fooyyessi fili.
Caancalaa Qindeessaa cuqaasi.
Sanduuqa Akkaataa Ittianaa irratti "Fuula Mirgaa" fili, kana booda TOLE cuqaasi.
Tarree Akkaataa fuula keessatti, "Fuula Mirgaa" mirga cuqaasi booda Fooyyessi fili.
Sanduuqa Akkaataa Ittianaa irratti "Fuula Bitaa" fili, kana booda TOLE cuqaasi.
Galmee kee irratti fuula issa jalqaba gara deemi, foddaa akkaataa fi dhangeessuu kessatti, tarree Akkaataa fuula kessatti "Fuula Mirgaa" lama cuqaasi.
Akkaataa fuula tokko irratti irraantoo ida'uf, Irraantoo - Saagi fili, kana booda akkaataa fuula issa irraantotti ida'amu barbaaddu fili. Goddayyaa irraantotti, barruu barbaaddu akka irraantotti fayyadamttu barreessi.
Akkaataa fuula tokko irratti jalaantoo ida'uf, Jalaantoo - Saagi fili, kana booda akkaataa fuula issa jalaantotti ida'amu barbaaddu fili. Goddayyaa jalaantotti, barruu barbaaddu akka mataduretti fayyadamttu barreessi.
Galmee kessatti mataduree fuula irratti yoo irraantoof jalaantoo qabachu hin barbaanne, Akkaataa "Fuula Jalqaba" fuula mataduretti fayyadami
Fuula duwwaa maxxansaman balleessuuf
Yoo fuulli guutuun lama ykn fuulli qobxiin lama kallattiidhaan galmee kee keessatti yoo walitti aananii dhufan,barreessaan durtii dhaan fuula duwwaa saaga. Atimmoo fuula warra ofumaan duwwaa ba'an akka hin maxxansamnee fi garaPDF iitti hin dabarre goota.
Fuulota duwwaa ofumann saagamani maxxansa irra mallattoo filannoo haqi
Qaaqaa qurxinsaa Saagi
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Writer/Alternating_Page_Styles_on_Odd_and_Even_Pages/om&oldid=703335"
This page was last edited 07:59:39, 2014-02-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.